Plus maivana - izay midika hoe, lamaody, modely, akanjo, akanjo, akanjo, kiraro, capsules, lobaka, sary
Ny sary marevaka, mifanaraka amin'ny fironana rehetra amin'izao fotoana izao, dia tsy mahafantatra na inona na inona amin'ny vanim-potoana na amin'ny tarehin'ny tarehimarika. Noho izany, ao amin'ny fanangonana lamaody dia tsy vitan'ny halehibia maromaro ihany, fa koa sokajy fitafiana fanampiny, izay ahafahan'ny zazavavy rehetra manana endrika mahafinaritra hahita ny vahaolana tsara indrindra amin'ny tsirony sy ny endriky ny lalàm-panorenana.
Ny vahaolana isan-karazany amin'ny fomba maoderina dia mamela ny ankizivavy tsirairay hijery tsara sy mahomby. Ny mpahaikanto dia efa nitsahatra tsy nihaino ny singa toy ny sary feno, tamin'ny famoronana tsipika lamaody. Na izany aza, dia ilaina ny mahatakatra ny halehiben'ny habeny. Ny akanjo toy izany dia ny sokajy fiakanjo ho an'ny be dia be. Ny paikady ambany kokoa amin'io mpitondra io dia heverina fa ny haben'ny 48, ary tsy misy ny teboka famaritana ambony, satria ao amin'ny tsena maoderina dia misy ny tsy fisian'ny ordinatera, ohatra, ny faha 60.
Amin'ny vanim-potoana vaovao, ny mpahaikanto dia tsy manamboatra tsangambato ho an'ny volavolan-tsakafo mahafinaritra, toy ny sokajy samihafa. Saika ny marika rehetra fanta-daza sy ny famoriam-bola ihany no manolotra vokatra avy amin'ny 42 taonan'ny faha-60 taonany. Ny akanjo maingoka dia hanampy anao hanantitrantitra ny fahamendrehan'ilay sary ary hanala ireo faritra tsy fantatra. Andao hijery ny lamaody mihoatra ny habeny 2018 - ireo vahaolana manan-danja indrindra:
Kolontsaina . Ny fisafidianana loko malefaka ho an'ny endrika matanjaka dia heverina ho maizina, volon-doko maitso izay somary mendri-maso - mainty, manga, marala, emerald. Ny safidy iray hafa amin'ny endriky ny pirinty dia sombin-dahatsoratra avo lenta.
Ny halavan'ny midi . Ny halavan'ny halavany dia manantitrantitra foana ny maha-vehivavy anao sy ny halavany. Amin'ny fanomezana ny safidy toy izany, dia hahomby ianao amin'ny sehatra tsy azo tsinontsinoavina, fa aza asiana tongolo gasy.
Feno fitaka . Aza matahotra ny manasongadina ny vatanao amin'ny silhouettes mafy. Ity safidy ity dia hanantitrantitra ny fahatapahan-kevitrao ary hanampy amin'ny fanesorana ireo rafitra ao amin'ny psikolojika.
Fabrics . Ny fitaovana maoderina momba ny fanjairana vokatra ho an'ny feno dia fitaovana mamoaka rano - sehatra, landihazo, chiffon, rongony. Na izany aza dia ilaina ny mitadidy fa tokony hialana ireo tontolon'ny famirapiratana, satria manampy volo ny vahaolana toy izany.
Femme décoration . Miala sasatra avy amin'ny fatran'ny volom-borona miaraka amin'ny fanampiana amin'ny lambondriaka mahafinaritra, flounces ary ny volony. Ny safidy tsara dia ny akanjo amin'ny kofehy manify, ny fifehezana mifanohitra, ny asymmetrika.
Amin'ny lamaody maoderina, ireo tovovavy manana tarehimarika goavambe dia tsy voafetra amin'ny fisafidianana vokatra lamaody, satria folo taona lasa izay. Ny mpanamboatra dia tsy mifangaro feno fanao amam-bika noforonina tamin'ny fomba sasany. Amin'ny alalan'ny fomba fanao mahazatra, ny fampifangaroana ny karazana sy ny Accessories, ary ny safidy ny vahaolana tena izy, dia hampiseho ny vehivavy rehetra, ny firaisana ara-nofo ary ny tsirinaina farafaharatsiny amin'ny tsipika isan-andro sy ny antokom-bavaka. Andeha hojerentsika ny akanjo misy ny vehivavy sy ny haben'izy ireo no malaza indrindra:
Jeans sy ny pataloha . Ny safidy tena hentitra ho an'ny feno dia heverina ho mahitsy na latsa-doko amin'ny fehin-kery. Raha ny olana ao an-kibo sy ny waist no tena olana aminao, dia mijanòna amin'ny modely misy fitaka tafahoatra.
Blouses . Ankoatra ny fitaovam-behivavy marevaka, mihaino tsara ny fisehon'ilay akanjo tsara tarehy décolleté, mampifantoka ny bust. Baska dia hanampy amin'ny fahitana miafina ny kibo manontolo, manasongadina ny tadidin'ny tavy. Ny fametahana fohy dia hanampy ny lanjany amin'ny sary.
Coat . Ny fomba fanehoana malaza any ivelany dia heverina ho fandresena iray. Amin'io tranga io, ny lamba dia mety ho malefaka na malefaka, mihazona tsara ilay bobongolo. Safidy tsara dia ho modely tsara miaraka amin'ny lavany midi na akanjo lava.
Jackets . Ho an'ny kiraro isan-tanàna, ny vahaolana tsara indrindra dia akanjo mamaoka amin'ny baomba. Mianara mody fohy kokoa na lava kokoa, arakaraka ny toerana sy ny olana. Safidy tsara koa ny hoditra hoditra , izay noho ny tselatra manjelatra dia manilika ny sain'ny tsy fahatanterahan'ny sary.
Ny tranga iray manerantany ho an'ny karazana fehezan-dalàna rehetra dia mbola henjana. Capsules plus size mampifandray ny halavan'ny faran'ny midi, mandrakotra ny lohalika. Safidy hafa malaza, toy ny isan'andro, ary ny tsipika mahazatra dia modely amin'ny fomba 50-60's. Ny akora maromaro dia hanampy amin'ny fanafenana ny volombava sy ny tongotra feno. Ny keky mafy dia hanasongadina ny fifehezana. Ary ny akanjo voafidy dia hanao ny sary rehetra vehivavy.
Toe-pantsy bebe kokoa
Toy ny amin'ny safidy amin'ny akanjo lamaody, ny endrika tsara tarehy ankapobeny dia tranga henjana. Raha toa ka manana tongotra feno ny ankapobeny dia misafidiana modely hentitra. Raha ny aviavinao no avonavona, atsaharo ny silhoueta iray mifototra amin'ny elastika. Ny safidy tonga lafatra dia ny masoandro midi-midina. Kely lava lava kokoa ny haben'ny palma amin'ny elatrao. Ity vahaolana ity dia manitatra ny fivoarana ary manampy amin'ny fifantohana amin'ny kiraro lamaody. Raha ny marina, ny fanatontosana mahomby indrindra dia ho solon'ny endrika sy heva samihafa.
Toe-javatra lehibe kokoa
Ny tarehimarika mahavariana dia tsy ny didim-pitsarana handavana fialantsasatry ny torapasika. Mifanohitra amin'izany, io no toerana ahafahanao mampiseho ny fahitanao anao amin'ny alalan'ny fisafidianana akanjo tsara mahandro . Ny sary maoderina indrindra ny habeny dia aseho amin'ny endrika rehetra. Ary amin'io tranga io ny fitsipiky ny sary vongana maizimaizina dia miasa. Modely iray modely amin'ny lamaody dia akanjo fitondra milomano amin'ny fomba ofisialin'ny 80 taona miaraka amin'ny kofehy mofomamy ambony sy balcony ambony. Mba hamehezana ny sorokao fotsiny, atsaharo ny lavaka na ny tankini miaraka amin'ny fefy iray eo amin'ny tendanao.
Ity antsipiriany ity, na dia miafina ao anaty akanjo aza, dia afaka manitsy tsara ny halehibenao noho ny hafa. Raha tsy mandeha amin'ny daty mahafinaritra miaraka amin'ny fitohizan'ny atsy ho atsy aoriana ianao, ny safidy tsara dia ny fitongilana ny akanjo sy ny lehibe. Hatramin'izao, ireo mpahaikanto dia manolotra modely tsy misy fotony izay tsy hay hadinoana. Ao amin'ny fisafidianana ny lobaka mamaritra ny endriky ny endriky ny fikorontanana dia mibontsina kofehy sy tsikombakomba matevina, balcomet siramamy miaraka amin'ny fanohanana tsara ary ny pantso-shorts.
Akanjo marika plus size
Tsy ny ankizivavy modely ihany no manintona ny sainy. Misy sokajin'olona iray izay maniry ny endriky ny rano ary mikarokaroka manokana ho an'ny brides toy izany. Ny style plus size dia manolotra karazany maro ny akanjo tsara tarehy tsara tarehy. Ny vahaolana tena tsara dia fomba iray eo amin'ny tany miaraka amin'ny jirom-bolo manjelatra sy kofehy vita amin'ny semi-transparent. Rehefa mifidy modely fohy, dia mendrika ny mipetraka amin'ny masoandro mamirapiratra vita amin'ny dantelina, seza na chiffon. Fa ny podjubniki ny multilayer sy ny plastika cascade dia tsara kokoa ny manaisotra.
Marika lehibe kokoa
Ny akanjo ho an'ny feno - dia tsy vitan'ny vokatra avy amin'ny orinasa tsy mahasarika, izay atao, toy ny hoe amin'ny marika USSR. Ao amin'ny tsena anio, ny vahaolana manokana avy amin'ny marika fanta-daza no aseho koa. Ny tombony amin'ity safidy ity dia ny kalitao avo indrindra amin'ny fitaovam-pitaovana sy ny fampifanarahana azy, ny fanarahana ny fironana farany sy ny fahafahana mahita ny tsimok'aretina marina. Karazana akanjo marika plus maromaro no maoderina indrindra amin'izao fotoana izao:
Ralph Lauren . Ity marika amerikana ity dia tsy mila dokam-barotra. Ny vokatra Ralph Lauren dia tsy ny tetibolan'ny ankapobeny, fa ny hatsaran'ny kalitaon'ny vokatra maoderina dia tsy namela mpifaninana mendrika.
Marks & Spencer . Raha mitady jeans maodilimody sy hatsarana ianao, dia mendrika ny hampiato ny fanangonana ny fanangonana an'ity orinasa ity. Na izany aza, amin'ny endriny hafa amin'ny mpanamboatra akanjo dia tsy maneho fahamboniana foana.
Asos . Marika izany rehetra izany. Aso dia nametraka ny tenany ho mendrika ny vidiny ambany sy ny kalitaony tsara. Ao amin'ny fanangonana ny marika dia ho hitanao ny singa rehetra ao amin'ny garderra - avy amin'ny kilao any ivelany. Ny mpanapaka ny feno dia antsoina hoe Asos Curve.
Mango . Ny marika Espaniola dia mamorona akanjo fitafy manokana ho an'ny mari-pamantarana volavolam-pandaminana araka ny anarana Violeta tena mendrika. Na dia izany aza, mora kokoa ny mividy vokatra maoderina amin'ny alàlan'ny fivarotana amin'ny aterineto, satria tsy dia fahita firy ao amin'ny trano fikoana izy ireo.
Elena Miro . Ity marika malaza ity dia manasongadina indrindra amin'ny akanjon'ny lehibe lehibe indrindra. Ary eto dia hahita vahaolana maika ianao amin'ny asa, kiraro isan-tanàna ary amin'ny làlana.
Ny lamaody maoderina dia tsy mifantoka fotsiny amin'ny fanangonana lamaody ho an'ny zazavavy manana endrika dimanjato, fa koa amin'ny modely mampiseho akanjo. Ity fomba fiasa ity dia mikendry ny hitazona ireo vehivavy be dia be tsy saro-kenatra ny vatany, manaisotra ny sigara ary manaiky ny tenany amin'ny maha-izy azy. Amin'ny fahazoana midadasika sy fampahalalana lehibe dia fomba iray mahomby amin'ny laza eo amin'ny sehatry ny fampiroboroboana ny tovovavy izay mampiseho mazava tsara fa ny fomba fiasa tsara tarehy manampy ny manova sy manintona. Andeha isika hanao fanadihadiana - ireo modely tena malaza indrindra amin'ny haben'ny habeny:
Lizzie Miller . Mitombo 180 santimetatra, maivana 80 kilao io zazavavy io. Tsara ho marihina fa ny modely dia mirehareha amin'ny ambarany mihoatra noho ny tamin'ny fotoana mahamay azy. Ny lazam-pizaham-pirenena no nitondra azy sary fotsy ho an'ny gazetiboky Vogue.
Crystal Rennes . Ity zazavavy ity dia nahitana fomba lavitr'ezaka tao amin'ny orinasa fanorenana avy amin'ny olona malemy saina izay manana aretina tsy manam-pahasalamana mifandraika amin'ny aretina amin'ny tsy fahasalamana ho an'ny fahombiazana fanampiny mannequin.
Sophie Dahl . Ny anglisy anglisy malaza dia iray amin'ireo voalohany nanao fihetsiketseham-pandrefesana tsy marim-pototra teo amin'ny kianja. Tamin'ny 40, Sophie dia nanohy nampiseho akanjo lamaody ary nanandrana nanoratra an-tsoratra ihany koa.
Tara Lynn . Ity tovovavy ity dia miasa ao amin'ny orinasa fanorenana tsy noho ny laza sy ny vola. Mampiroborobo am-pahibemaso hetsika mahasalama manoloana ny vatana mangatsiatsiaka sy ny fientanentanana amin'ny ady amin'ny fanamafisana ny rafi-pandaminana.
Ashley Graham plus lehibe
Ny modely Amerikana plus size Ashley Graham dia nanomboka ny asany teo amin'ny lampihazo 12 taona. Hatramin'ny fahazazana, io tovovavy io dia nanamarina ny mari-pamantaran-tarehimarika telo ary tsy dia menatra loatra ny vatany. Ho an'ny loko lehibe kokoa sy ny fampakarana, i Ashley dia nesorina tsy tao amin'ny akanjo ambony sy akanjo fotsiny, fa koa ho an'ny fanangonana ny akanjo sy ny akanjo. Graham dia mitafy ny akanjon'ilay andaniny 58 ary tsy ho very kilao.
Modely maimaim-poana Tess Holliday
Ity tovovavy ity dia tsy mandinika ny volany ho toy ny tsy fahampiana, fa kosa ny mifanohitra amin'izany, miantso fahamendrehana izy. Ho an'ny loko hafa, ny modelim-pitaovana maoderina dia nanao tattoos lehibe marobe izay tsy niafina nandritra ny horonan-tsary ny akanjo sy ny kiraro. Tess Holliday miakatra 160 cm mitentina 155 kilao. Mandritra izany fotoana izany dia mitarika fomba fiaina mahasalama izy ary tsy mampiseho andro iray tsy misy toeram-pisakafoanana.
Katya Zharkova - modely bebe kokoa
Izany no mahatonga ny vehivavy mody mody hiantsoana bebe kokoa ny fampisehoana lamaody tandrefana. Na izany aza, modely rosiana hafa koa dia nalaza tamin'ny fomba maoderina . Ary iray amin'ireo malaza indrindra i Katia Zharkova, izay mirehareha amin'ny fombany ary mamporisika ny fiarahamonina hanaiky ny fahasamihafan'ny hatsarana. Na dia izany aza, nanamarika ilay zazavavy fa ny fahasambarany dia tsy ny mitondra ny vatany, fa amin'ny fanatanjahantena tsy tapaka ihany koa.
Palazzo pataloha ho feno
Accessories amin'ny akanjo manga
Photoshoot amin'ny ankizivavy feno
Amin'ny inona ny manao akanjo japoney?
Nahoana no misy pocket kely amin'ny jeans?
Furosemidy ho an'ny fahazaran-doza - ahoana no atao mba hampihenana ny lanjany sy tsy misy voka-dratsy amin'ny vatana?
George Clooney dia nahita Sandra Bullock namany
Irina Shayk tao amin'ny fampisehoana Pronovias dia naneho ny havan-tandrony rehetra
Fikajiana mody - fahavaratra 2015
Modely tamin'ny taonjato faha-18
Lanitra fantsakana ho an'ny lakozia
Mihabetsaka ny pancreatitis mitaiza
Tany Londres, fampiratiana iray ahitana sary maromaro an'i Marilyn Monroe
Mamakia garderina ao amin'ny efitrano fandriana
Ny bronchoscopy - ahoana ny fomba fitsaboana, ary inona no endri-javatra?
Tsaramaso sy voanio voanio